Ocylococcinum muddada uurka
Qoyska iyo arooska
Cudurrada cudurrada Catarrhal inta lagu guda jiro horumarinta uurjiifku waxay inta badan horumarisaa Gaar ahaan waxay saameeyaan haweenka uurka leh xilliga dayrta-guga. Badanaa cudurrada faafa waxay saameeyaan haweenka uurka leh marxaladaha hore ee uurka - 1,2 trimester.
Marka calaamadaha ugu horreeya ee hargabku soo baxaan, su'aasha ayaa soo baxaysa sida loo daaweeyo, marka haweeneydu filayso ilmo, daroogooyinka iyo sida loo qaato. Marka la eego xaqiiqda ah in daawooyinka ugu badan ee ka hortagga uurka inta lagu guda jiro uurka, takhaatiirtu waxay xoojinayaan magacaabida daawooyinka loo yaqaan 'homeopathic'. Tusaale ahaan tani waxay noqon kartaa Oscillococcinum, oo inta badan la qoro xilliga uurka. Aan aragno daaweyntan oo dhaw oo waxaan kuu sheegi doonaa haddii aad qaadan karto Ovcillococcum inta aad uurka leedahay iyo sida aad u qaadaneyso.
Waa maxay Oscillococcinum?
Sida horey loogu soo sheegey, daroogadaan ayaa iska leh kooxda daawooyinka guryaha ee loo yaqaan 'homeopathic medicine' waxaana soo saaray mid ka mid ah shirkadaha dawooyinka ee Faransiiska. Daawada waxaa lagu soo saaraa qaabka granules, taasoo sahlaysa qaadashada iyo ilaalinta qiyaasta uu dhakhtarku soo qoray.
Marka la eego halabuurka daroogada laftiisa, waxaa ka mid ah qaybaha sida dabiiciga ah sida soo saaridda laga soo saaro wadnaha iyo beerka ee nuucyada barberry iyo qaybaha dheeraadka ah (lactose iyo sucrose).
Sidee habboon in aad u qaadato Ocylococcinum muddada uurka?
Si aad u bilowdo, waa in la ogaadaa, sida ku cad tilmaamaha loogu talagalay isticmaalka Otsilokoktsinum, daawadani ma aha mid ka hor istaagaysa uurka. Waxaa intaa dheer, Oscillococcinum inta lagu guda jiro uurka waxaa lagu qori karaa 1, 2, iyo 3 trimester, sababtoo ah Ma jiraan wax xaddidaad ah oo ku saabsan bilaabista qaadashada daawadan iyada oo uur ku jirta.
Si kastaba ha ahaatee, inkastoo arrintan, daroogada laguma qaadi karo haweeneyda uurka leh iyada oo aan la siin talo bixin caafimaad. Kaliya dhakhtarka oo ogyahay dhammaan sifooyinka uurka, waa in uu qoro daawooyin.
Marka la eego qiyaasta daawada, waxay ugu horreyn ku xiran tahay ujeedada daroogada. Marka, haddii Ocylococcinum loo magacaabo ujeedada ah in la fuliyo tallaabooyinka ka hortagga ah, markaa, sida caadiga ah, 1 buunsho ayaa loo qoraa, waxyaabaha ku jira isla markiiba lagu shubo aagga xuduudda ah, i.e. carrabka hoostiisa. Tani waxay sahlaysaa nuugista degdegga ee qaybaha daroogada ee dhiigga. Qaado daawada loogu talagalay ka-hortagga hargabka wax ka badan 1 mar 7 maalmood.
Marka calaamadaha ugu horreeya iyo muujinta hargab caadi ah muuqda, waxaa lagu talinayaa in la qaato 1 granule maalin kasta usbuuc. Haddii marxaladda firfircoon ee cudurka uu horayba u yimid, madax xanuun, kororka heerkulka, daroogada ayaa lagu talinayaa in la cabo ugu yaraan 2 jeer maalintii 3 maalmood.
Marka laga hadlo khilaafka iyo saameynta daawooyinka ka imaanaya isticmaalka daroogada, way jiri karaan. Taas waxaa laga yaabaa, in laga yaabo, kaliya in loo aaneyn karo shakhsiyaadka daroogada.
Sidaa daraadeed, waa in la yiraahdaa Oscillococcinum waa daawo aad u fiican oo si siman loo isticmaali karo, labadaba ka hortagga hargabka inta lagu jiro uurka iyo dagaalka iyaga ka soo horjeeda. Waa wax qaali ah in la caawiyo Oscilococinum marka la isticmaalayo marxaladaha hore ee uurka, marka maandooriyayaasha kale aan la isticmaali karin sababtoo ah waxyeellooyin badan iyo waxyeelo badan.
Muxuu ilmuhu uurka ku jiraa?
Noocyada dadweynaha ee go'aanka uurka hore
Hemoglobin ee dumarka uurka leh
Rhinonorm - tilmaamo loogu talagalay isticmaalka uurka
Wilprafen muddada uurka
Ascorbic inta aad uurka leedahay
Dhalida cunugeeda 30 wiig gudahood
Espumizane inta lagu jiro uurka
Jadwalka uurka - 2 trimester
Usbuuca 25aad ee uurka - maxaa dhacaya?
Ilkuhu way jiran yihiin waqtiga uurka - waxa la sameeyo ama samee?
Dufaston bilowga uurka
Kiniiniyadu maxay uur leedahay?
Hadday suurtogal tahay in la joojiyo xiliga uurka?
Kaniisada shirarka - waa maxay macnaheedu inuu yahay kaniisad riyo ah?
Midabkee ayay ku haboon tahay gaduudka?
Duufaanta gubayaasha ee loogu talagalay cayaaraha
Tattoo ku-meel-gaar ah guriga
Kharashka dharka laadarka leh ee gacmahaaga
Jaakad la jeexay
Ilmo 11 bilood jir ah
Salad hilibka ah
Maxaa ku xiran kabaha cawlka?
Kabaha dabiiciga ah ee dabiiciga ah - dabeecada jilicsan iyo idil
Kombiyuutarka leh iftiin muhiim ah
Gabadha Michael Jackson ayaa si diidmo ah u diiday inay la xiriirto hooyadiis
Primet - laabto dhabanka
Cutlets kalluunka foornada
Beerka digaaga ee labeen dhanaan
Kabaha - Xilliga guga 2015
Rooti on kefir - cuntada ugu dhaqsaha badan ee guriga macaan oo la dubay
© 2021 so.tierient.com